अचानक काठमाण्डौको सडकमा कता बाट आए चिम्पान्जिको हुल, हेर्नुस् के, कसरी? – Khabar Patrika Np
अचानक काठमाण्डौको सडकमा कता बाट आए चिम्पान्जिको हुल, हेर्नुस् के, कसरी?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०७, २०७८ समय: ९:३४:१३
काठमाण्डौको सडकमा अचानक आयो चिम्पान्जिको हुल, हेर्नुस् के, कसरी र कता बाट आए।
तपाईँ एमालेमा बस्न चाहनुहुन्न भने कृपया एमाले छोडनुस्। हामी पुत्ला जलाउँदैनौं। सम्मानजनक बिदाइ गर्छौ। तर, एमालेमा बसेर ब र्वा द गर्नेहरुलाई युवासंघले तह लगाउनै पर्छ,उनले चेतावनी दिँदै भने।